kyawlay – ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းများနှင့်သုတ/ရသ/ဟာသ အစုံအလင်း
ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၌၁၀နှစ်သမီးလေးအားစိုးသီဟအ သက် (၂၉ )နှစ်မှအလိုမတူသားမယားပြုကျင့်မူ့ဖြစ်ပွား ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ၁၉-၃-၂၀၁၈ရက်နေ့ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ဝက်ချောင်းေ ကျးရွာအုပ်စုထမင်းဆုပ်ကုန်းကျေးရွာနေအဦး---------- ၏သမီးဖြစ်သူမ---------အသက် (၁၀)နှစ်အားကျောင်း ကုန်းမြို့နယ်သဲဂုံကျေးရွာအုပ်စုသဲဂုံကျေးရွာနေအဘဦး လှမြင့်၏သားဖြစ်သူမောင်စိုးသီဟအသက် (၂၉ )နှစ်မှ အလိုမတူသားမယားပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် ( ၁၀ )နှစ်သမီး အားအလိုမတူသားမယားပြုကျင့်ခဲ့သူစိုးသီဟအားေ ကျာင်းကုန်းမြို့ရဲစခန်းတွင်…
ထီးချိုင့် ဘော်ဒါဆောင်တခုတွင် လက်လုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲ၊ ၆ လုံး သိမ်းဆည်းရမိ ========================== ========================== စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ အလယ်တောကျေးရွာ၊ ဖူးပွင့်ဝေဆာ ၉ တန်း၊ ၁၀ တန်း ဘော်ဒါဆောင်တွင် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က လက်လုပ်မိုင်းလို့ ယူဆရတဲ့ အရာတွေ တွေ့ရှိပြီး ပေါက်ကွဲမှုတခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘော်ဒါဆောင်မှာ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မင်းမင်းအေး၊ ညီမဖြစ်သူ…
Ghostwriter Masterarbeit Iphone Apps GhostwriterSchreiben.de Ghostwriter Masterarbeit Iphone Apps GhostwriterSchreiben.de This Sollen Studierende im laufe des Studiums auf Examens (zB Hausarbeit schreiben lassen. Allerdings anfangliche Suche meist nicht aus und…
10 Producing Recommendations - Produce What You Know Power-Essays Article Critique Universities accept more applicants, including worldwide students who do not have the appropriate grasp from the British language to…
၂၀၁၇၏ ကမ္ဘာ့လုံခြုံမှုမရှိဆုံးမြို့များစာရင်းတွင် ရန်ကုန်ဒုတိယချိတ် ================== ================== The Economist Intelligence Unit အဖွဲ့က ထုတ် ပြန်သော ၂၀၁၇ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းသောမြို့များညွှန်းကိန်းစာ ရင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သည်အောက် ဆုံးဒုတိယနေရာ၌ ရပ်တည်နေ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး မြို့သည် ကျန်းမာရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံတို့တွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနည်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ ဖျင်းခြင်းနှင့်…
Simple Tech Savvy Book Report assignment pay my assigmentWe take every possible measure to protect students� identifiable data and information. MyAssignmenthelp.com serves as the best platform for students who need…
ဦးလေးက တူမကို အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်သည်ဆိုကာ ရဲစခန်းသို့ လာရောက်တိုင်ကြား ================== ================== မကွေးတိုင်း ကံမမြို့ နယ်တွင်နေ အသက် (၁၄) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို ဦးလေးတစ်ဝမ်းကွဲက အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဆိုကာ မိခင်ဖြစ်သူက ရဲစခန်းသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် လာရောက်တိုင်ကြားသည်။ ကံမမြို့ မင်းကုန်းအမှတ် (၁) ရပ်ကွက်နေ (၄၁) နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးသည် ဖေဖော်ဝါရီ…
အသက်မပြည့်သေးသူအား သားမယားပြုကျင့်သူကို အရေးယူ ================== ================== မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီ လာခရိုင်ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တွင် facebook ရှိ messenger ပေါ်မှ ချစ်ကြိုက် ပြီး အသက်မပြည့်သေးသူအား သားမယားပြုကျင့်သူကို အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် ရွာတန်းအုပ်စု လျော်ပင်ကျးရွာနေ မ-----(၁၄နှစ်)နှင့် ဝမ်းတွင်း မြို့နယ် ဆည်ရွာကျေးရွာနေ နိုင်မျိုး ဝင်း(၂၁နှစ်)တို့သည် ယခုနှစ်…